Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina i-QUARTZ | IMontary
Isitifiketi: Umbiko we-CE / SGS / Wokuhlola
Ubukhulu 18 mm / 20mm / 30mm
Izicelo I-Vanity Top, i-Kitchen Counter phezulu, i-Table Top neFenisha, njll
Inqubo Yezobuchwepheshe Senza iziqongo zamatshe nge-quartz, sinqunywe ngomshini bese sipholishwa ngabasebenzi bethu abanolwazi nabanolwazi.
Ukusebenza nokusetshenziswa Igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala, ihhotela, i-villa, ukusetshenziswa kwasekhaya
Iphakheji Ikesi Ngokhuni nokupakisha amagwebu
Imodi Yokukhokha T / T, L / C.
Isikhathi sokuthumela Ngezinsuku eziyi-15 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda
Ukukhethwa kwe-Edge Kwenziwe lula, ikhala lenkunzi lesigamu, ikhala eligcwele lenkunzi, i-beveled, i-1/4 nxazonke, i-laminated beveled, i-laminated i-1/4, i-round round, njll.
Isipiliyoni: Njengoba unolwazi lweminyaka ekwakhiweni kwamanga, iMontary ingongcweti futhi inekhono ekwakheni amatshe okufakelwa namatshe emvelo. Iningi labasebenzi bethu linokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-6 ekubumbeni, bayasebenza futhi bayakhula eMontary, futhi bakulungele ukunikela ukuhlakanipha kwabo nesipiliyoni sabo kuwo wonke amakhasimende ngokwenza i-countertop ephelele. Ikhwalithi: IMontary ibona ngokujulile ukuthi ikhwalithi ingumongo wentuthuko yesikhathi eside. Ngakho-ke sigcizelela ukuhlolwa izikhathi ezi-4, ucezu ngalunye, qiniseka ukuthi iphutha lincishiswe lalingaphansi. Isikhathi: Ngesikhathi sokulethwa, izinsuku ezingama-20 zokusebenza kwesitsha esisodwa se-20ft. Insiza: Siyakwazi okufunayo futhi siyakwazi ukukusiza kahle. - Sinokuthengisa okungu-30 okwenza isevisi ye-VIP ngendlela eprofeshinali - Uhla lwemikhiqizo eyizinkulungwane, umbala, isitayela, okulula amakhasimende ukuthenga ngakunye - Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende zemikhiqizo ehlukahlukene - Iminyango yezinsiza ezikhethekile, ubuchwepheshe imisebenzi yokuthumela, singahlinzeka ngokuhamba okuhle kakhuluf
Ukugeleza Komkhiqizo we-Counter Top:
Isinyathelo 1 Ukuzisika (I-Infrared Bridge Cutting Machine)
Isinyathelo 2 I-Cutout (Umshini Wokusika Amanzi Amanzi)
Isinyathelo 3 Ukuzisika kwe-45 degree (Umshini wokusika we-degree engu-45)
Isinyathelo 4 Wokucwebezelisa (wokucwebezelisa Manual)
Isinyathelo 5 I-Chamfer (i-Manual Beveling)
Isinyathelo 6 Hlanza nokuHlola (Ukuhlola okwenziwa ngesandla)
Isinyathelo 7 Ukupakisha (ngokhuni oluhlanganisiwe)
1. Wenzani uMontary? IMontary ingumkhiqizi osebenza ngobuchwepheshe futhi onolwazi futhi owakha amatlabhu okwenziwa / okwemvelo namatshe aphezulu asetshenzisiwe, nokuthekelisa okungaphezu kweminyaka eyishumi emakethe yomhlaba. 2. Kungani amakhasimende kufanele akhethe iMontary?
Amaphuzu aqinile eMontary:
1) Uhla olubanzi lwamaqoqo ombala.
2) Hlala unamathela kuthambekela lomhlaba jikelele.
3) Gxila kakhulu kumaqoqo asuselwa kokumhlophe nasempunga nokuqoqwa kwemabula / kwemigqa.
I-4) Ikhwalithi esezingeni lomhlaba jikelele kanye nensizakalo, ngamanani ashibhile amaShayina
5) 7 + 24 ukuxhumana okulula nokuphendula okusheshayo.
I-6) Kokubili ama-slabs amatshe kanye nezinsika ezenziwe ngaphambilini ziyatholakala eMontary.
3. Yimaphi amazwe ezimakethe ezinkulu zeMontary? Amabhilidi amatshe aseMontary nezinsika ezenziwe ngaphambilini zithunyelwa kakhulu e-USA, Australia, Canada, UK, Italy, Mexico, Mexico, Dubai, Turkey, Brazil, South Africa, HongKong, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, njll.
4. Ngabe uMontary uke wabamba iqhaza kunoma yimuphi umbukiso? Njalo ngonyaka iMontary ibamba iqhaza emibonisweni e-USA, Europe, Dubai, Brazil, Asia, njalo njalo.
5. Ngabe iMontary inekhono lokwenza iziqongo zamatshe ezenziwe ngaphambilini zamaphrojekthi? Yebo, iMontary inendawo yayo yokusebenzela yokwenziwa ngalo lonke uhlobo lwezinto ezizenzekelayo zamatafula asetshenziselwe amaphrojekthi aphezulu.
6. Yiluphi ulwazi amakhasimende okufanele alunikeze iMontary ngokwenza iziqongqo ezenziwe ngaphambili? Amakhasimende kufanele ahlinzeke ngemidwebo yezitolo noma umdwebo obhalwe ngesandla ngemininingwane yobukhulu nobubanzi bephrofayela nobuningi obuqondile.
7. Yimaphi amaphrofayili onqenqemeni atholakala eMontary? IMontary iyakwazi ukwenza zonke izinhlobo zamaphrofayili onqenqemeni, njenge-Eased Polished, Half Bullnose, Full Bullnose, Bevel Edge, Radius Edge, Flat Laminated, Bevel Laminated, Radius Laminated, njll.
8 IMontary izipakisha kanjani iziqongo zamatshe ezenziwe ngaphambili? IMontary ifaka iziqongo ezenziwe ngaphambili ngamakhreyithi aqinile okhuni nogwebu ngaphakathi kwekesi ukuze zivikeleke.
9. Kungenzeka yini ukuhlola izimpahla ezisembonini yaseMontary ngaphambi kokulayisha? Yebo, wonke amakhasimende amukelekile ngokufudumele ukuze ahlole izimpahla ngaphambi kokulayisha.
10. Kungenzeka yini ukwenza i-OEM ngeMontary? Yebo, iMontary inikeza insizakalo ye-OEM ngokuphrinta iLogo yekhasimende noma igama lenkampani.
Langaphambilini NANO Ingilazi Itshe
Olandelayo: UMBHALO WOBUCIKO
I-Quartz Stone Yokwenziwa
I-Quartz Stone Counter Phezulu
Itshe elimhlophe le-Quartz